Ngabe i-Extreme Ego izama kanjani ukungena? - Mytika Speak
Ikhaya / Ukweqisa / Ngabe i-Extreme Ego izama kanjani ukungena?
Ngabe i-Extreme Ego izama kanjani ukungena?
I-Extreme Ego imizamo yokugxila kubantu ngokusebenzisa imibono ukuze ibhekise ezindaweni ezibucayi zempilo yabo (abathandekayo, ubungcweti, ukungazethembi, njll.).
Uma unokwesaba okuthile okungaqondakali, ukubonakaliswa kungenzeka. Lokhu kwenzeka lapho ubona ukwesaba kwakho komuntu siqu ezenzweni zomunye umuntu. Lokhu kwenziwa ukuze ngethemba ukuthi uyibone inkinga yakho ngokuyibona ingaphandle kwakho. Ngeshwa, abantu bavame ukuphazanyiswa kakhulu ukuthi babone okuboniswayo okwenza kube nzima kubo ukuthi bafunde i- isifundo. Uma lokhu kwenzeka, abaningi bagcina sebenza izahlulelo kubantu ababakhombiselayo.
Isibonelo, uLisa uyavuka ahambe aye endlini yakhe yokugezela. Uma ezibuka esibukweni, ucabanga ukuthi ubukeka evuvukele bese eqala ukuzizwa engavikelekile ngokubukeka kwakhe. Kamuva kusihlwa, uLisa uya ekuvuleni igalari nesoka lakhe uMark. Ngenkathi ekhuluma nabantu abathile, ubheka phezulu bese ebona uMark edlala ngothando nomunye wabaculi. Lokhu kumenza azizwe efutheka ngaphakathi. Lapho engena emotweni noMark, uLisa uqala ukusola uMark ngokuzama ukumkhohlisa. UMark ugcizelela ukuthi ubebuza nje lo mculi ngalokho azama ukukuveza emsebenzini wakhe. ULisa, ecasulwa ngokwengeziwe, akaqapheli ukuthi u-Extreme Ego umenze wabona uMark njengokudlala ngothando ukukhombisa ukungazethembi kwakhe.
Abantu bobabili bayizisulu nabenzi balokhu; impande yakho konke ukwahlulela.
I-Extreme Ego ingaba nesihluku impela. Lapho ingena engqondweni yami ngokungavikeleki kanye nokuzinqumela, ngithola ukuthi kufanele ngiyikhombe ngokushesha ukuyivimba ukuthi ingakhuli. Lo ngumsebenzi onzima kakhulu kimi kwazise i-Ego yami izama ukungivimba ekubukeni ngaphakathi njengoba ikhetha ukuphuma. Okungisebenzelayo empeleni ukubuka ngaphandle kwami ​​futhi ngicabanga ukuthi umuntu engimthandayo uzizwa ngendlela engizizwa ngayo njengamanje. Bengizothini kubo? Ngingabenza kanjani bazizwe bengcono? Lapho sengibekele isithandwa sami iseluleko sami, ngisisebenzisa kimi. Le nqubo ingenze ngabona ukuthi ngingaba nzima kimi kunalokho enginakho kwabanye nokuthi ngidinga ukuzithanda nokuzamukela ngokwami ​​njengoba ngithanda labo engibathandayo.
Amathegiukuqonda ukweqisa ngokweqile kakhulu Ukwahlulela ukukhula komuntu siqu ukucabanga ingokomoya